Sebenza kubaselula kwihlobo le-2016: 14, 15, 16, iminyaka eyi-17. Indlela yokulungiselela umntwana osemtsha ukuba asebenze ehlobo
Sebenzela ulutsha kwihlobo le-2016
Ngethuba lokuqala kwehlobo, abantwana besikolo banexesha elininzi lokukhululeka. Omnye uchitha iintsuku ezishushu ezinde ixesha elinde elunxwemeni, abanye abazali bathumela "kwidolophana" kunogogo, kwaye abaninzi banokuphumla ekufundeni okuxinzelelekileyo kwimihla ngemihla kwi-computer kwikhompyutheni yasekhaya. Nangona kunjalo, namhlanje phakathi kwentsha kukho ukuthambekela okubonakalayo ekufumaneni imali kwixesha lehlobo lasehlobo. Ngoko, umsebenzi oyenzekayo kubantu abaselula ehlotyeni ithuba elihle lokuzibonakalisa kumsebenzi omtsha "omdala," kwaye ufunda nendlela yokuceba imali engenayo kunye neendleko ngokwengqiqo yakho.
Indlela yokulungisa intombazana ukuba isebenze ehlobo - uthini umthetho? Usebenzele ihlobo evelayo kwiminyaka eyi-14 - njani ukufumana? Usebenze ihlobo leentsholongwane ezisusela kwiminyaka eyi-15-into oyifunayo ukuyiqonda I-post yeentengiso kunye namaphephancwadi I-Courier ye-Courier Umthengisi Umsebenzi ofanelekileyo wehlobo le-2016 kubantwana abavela kwiminyaka eyi-16 Abahambisa iziqhumiso Ukuhamba kweenja Ukubhala ukubhala kunye neziganeko Umsebenzi wehlobo le-20 kwiminyaka eyi-17-amathuba okukhula!
Indlela yokulungisa intombazana ukuba isebenze ehlobo - uthini umthetho?
Okokuqala, kwinqanaba lomthetho, ukuqashwa kwabaselula banempawu zabo. Emva kwayo yonke into, injongo yaloo mithetho kukukhusela umntwana kumqeshi ongekhohlisi ofuna ukufaka imali kwimisebenzi yabantwana.
Imigaqo esemiselweyo kunye nemigangatho yokuqeshwa komntu osemtsha:
Ubudala - engaphantsi kweminyaka engama-14. Umthetho wasekhaya uthi emva kokufumana ipasipoti intombazana inelungelo lokufuna umsebenzi.
Imvume yomnye wabazali ukuba basebenze (ngokubhaliweyo) - loxwebhu olongezelelweyo luqhotyoshelwe kwipasipoti kwimeko apho umntwana engeneminyaka eyi-16 ubudala.
Isatifikethi sezonyango esivela kwiziko lempilo malunga nomgangatho wezempilo kunye nencwadi yezonyango (ukuba kufuneka ukuba usebenze) - amaphepha amabini amiselweyo.
Inkontileka yengqesho okanye isivumelwano somsebenzi (ngokubhaliweyo) kufuneka sigqitywe kwisithuba seentsuku ezintathu ukusuka ngomhla wokuqeshwa.
Ukungabikho kwexesha lokuvavanya, kwaye unokuyeka umsebenzi wakho wedwa okanye xa unqunyulwa yinkampani - ngaphandle koko uya kuqhagamshelana nekhomishini kwimicimbi yezemveko kunye nokuhlolwa komsebenzi karhulumente.
Ukuthobela nemigangatho yomsebenzi womhla - kwinqanaba elithile leminyaka, kukho imimiselo ebhaliweyo yemihla ngemihla kunye neveki yokuzonwabisa.
Ukuvinjelwa kwimisebenzi enobungozi kunye neyingozi - kwii-nightclub, ii-casino, i-casinos saloons, phantsi komhlaba, kwiindawo zokuhlawula impahla, ezinxulumene nokuqhutyelwa kwezithuthi, ukuthengiswa kotywala kunye noogwayi.
Usebenzele ihlobo evelayo kwiminyaka eyi-14 - njani ukufumana?
Sebenzela ihlobo elalutsha elishumi eli-14 ubudala
Abantwana banamhlanje bakhula ngokukhawuleza. Ngenxa yoko, abaninzi abantu baphupha ngokuba nemali yabo siqu, ngaphezu kwesikhwama semali yomzali, onokuyifumana kunye nomsebenzi wakho. Ewe, kwiminyaka eyi-14 ubudala akulula ukufumana umsebenzi - inani elincinci labaqeshi liyesaba uxanduva, alufuni ukwenza ishedyuli esilula okanye ukuchitha ixesha loqeqesho njengolu hlobo "oluselula". Emva kwakho konke, ngomthetho, kwintombazana engaphantsi kweminyaka eyi-16, isiqhelo somsebenzi si-5 iiyure ngosuku kunye neeyure ezingama-24 ngeveki.
Sebenzela ihlobo evelayo abasusela kwiminyaka eli-14 ubudala
Nangona kunjalo, ukuba ufuna, unokufumana isithuba seposi, umgqugquzeli, umthengisi wamaphecana okanye iintengiso. Ukongezelela, namhlanje kukho iindlela ezininzi zokusebenzela ekhaya kude-nge-Intanethi. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba uqaphele ukukhangela umsebenzi kwinethiwekhi yomhlaba wonke, kuba kukho ubuqhetseba obuninzi, kunye "nezilingo" zemivuzo enesigxina phakathi kwezithuba. Kodwa ukubhalwa kweengxelo kwiintlobo ezahlukahlukeneyo ze-intanethi kubonakala kunokwenzeka kubafana abalishumi elinanye.
Sebenzela ihlobo kwiintshumi ezi-15 - oko kufuneka ukwazi
Naliphi na umntwana osemva kule nqanaba lonyaka angathembela kwiindawo ezininzi ezikhethiweyo ezingafunanga imfundo ekhethekileyo.
Iintengiso zeBillboard kunye namaflaya
Lo msebenzi udinga ukunyamezela ngokwenyama, kuba kuya kufuneka uhambe ngokubanzi malunga nomzi, kunye nokwazi indawo 'yeengongoma' zokuthumela iintengiso. Njengomthetho, loo msebenzi uhlawulelwa kwisiqwenga-ngesiqendu.
Umsebenzi uthatha ukuba ubuncinane ubuncinane bamava kulo mkhakha kunye nencwadi yokuhlambulula. Ukongezelela, umviwa wezithuba zesikhalazo kufuneka abe nembonakalo emnandi, intetho efanelekileyo kunye nokuthintela. Liliphi uluhlu lwemisebenzi yomlungiseleli? Oku kukwazi ukuwamkela umyalelo, iingcebiso malunga nemibuzo malunga nemenyu, ukuseta kwetafile, ukuhanjiswa kweitya zokutya, ukubala kunye neendwendwe.
Umsebenzi we-courier udinga ukugcina ixesha, uxanduva, kunye nesimo somzimba. Izikhwama kunye neepakethi zokuhanjiswa kwabathengi zinokuba nzima, kunye nabo kubamkelekile ukuba bahambe emide emide.
Igama elithi "ilizwe langaphandle" libizwa ngokuba ngumqeshwa wesitolo, umsebenzi wakhe uquka ukubeka iliso kwiimpahla, ukuzalisekisa ngexesha elifanelekileyo iithalafu, ngokuziqhelanisa "kwindlela efanelekileyo" ebaluleke kakhulu kumthengi. Ukongeza, umnini-mthengisi kufuneka alawulwe ubomi be-shelf yezinto ezibekwe kwiithalafu kunye nemeko yeepakethi. Lo msebenzi udinga uxanduva, ukuchaneka nokunyamekela.
Umsebenzi ofanelekileyo wehlobo le-2016 kumntwana oneminyaka eli-16 ubudala
Ngokomthetho, umhla wokusebenza wentsha engama-16 ukuya kwe-17 iminyaka ayikho iiyure ezingama-7, kunye neveki - iiyure ezingama-36. Oku kuhambelana nezithuba zeholide, kodwa ngexesha lokufunda ngeli xesha linciphisa kanye ngokuphindwe kabini.
Loo msebenzi ufaneleke ngakumbi kubafundi bezikolo eziphakamileyo kunye nabafundi, kwaye iimvuzo zixhomekeke ngokupheleleyo kwizakhono zobugcisa kunye nezakhono zokuthengisa izinto. Kubalulekile ukuba bakwazi ukuthetha kunye nokuqinisekisa.
Abanikazi bahlobo abanezinyawo abanamaxesha amaninzi ababa nako ukuzisa izilwanyana zabo ngaphandle. Nangona kunjalo, ukuba inja inkulu, mthembele ngakumbi njengomfana oqinileyo kunentombazana enobuthakathaka. Ngoko ke, kule meko, intlawulo iya kuba phezulu.
Ukulawula ukubhala kunye neziqulatho
Kudinga izinga eliphezulu lokubhala nokubhala, kunye nokukwazi ukwakha iziphakamiso kwiphepha. Ulwazi lwesifundo somsebenzi wokubhala luyimfuneko.
Sebenzela ihlobo evelayo kwiminyaka eli-17 - amathuba okukhula!
Umntu oneminyaka elishumi elinesixhenxe ubudala uthathwa njengakhulile. Ukongeza kwezi zithuba ezi ngasentla, kunokwenzeka ukuba ufumane umsebenzi weofisi njengomprogram okanye umyili - ngokuqinisekileyo, ngamakhono afanelekileyo kunye neetalente. Isikhundla esinjalo siza kuba yintlebhodi ebalulekileyo yokukhula komsebenzi. Ukuba umntwana uthanda umculo, ngoko unokwenza usebenze kwikhofe okanye kwindawo yokutyela, usebenza njengengxenye yeqela lomculo.
Ukusebenza kwabaselula ehlotyeni ithuba elihle kakhulu lokufumana imali yabo yokuqala, kodwa nokufumana amava amancedo ebantwini, ukuphuhlisa ubuchule babo, iitalente kunye neempawu zabo. Nangona kunjalo, musa ukulibala malunga nabanye - ngakumbi ehlobo!
Vula ibhizinisi elidibeneyo
Izizathu zengqondo zokungaphumeleli ekwakheni umsebenzi
Indlela yokuthatha umhlalaphantsi ngokuthanda
Ukufundiswa kumyalelo kunye nemisebenzi yomkhaya yomntwana
Iidraphe zokupheka i-kebab ekhaya
Iibhonsi kunye ne-sausage
Ukuhlukanisa kumakhadi okudlala: intsingiselo yamakhadi, ukuxhamla inceba, uthando